Websaydhyada ugu fiican ee wax walba lagu helo bilaash - Gadget News | War gadget
Daawashada taxanaha ama filimada khadka tooska ah waa waxyaabaha ugu caansan. In kasta oo ay tahay markay tahay inaad ku daawato waxyaabahaan qadka tooska ah waxaan haysannaa dhowr siyaabood oo lagu sameeyo. Maaddaama aan haysanno dhulal badan oo hoormo ah oo loo heli karo tan, oo aan si fudud ugu daawan karno taxanaheenna ama filimada aan ugu jecel nahay. Waxaan sidoo kale isticmaali karnaa bogag bilaash ah ama bilaash ah.
Marka haddii aad raadineyso warar ku saabsan burcad-badeednimada iyo bogagga ugu caansan inaad soo dejiso oo aad ka daawato waxyaabaha bilaashka ah, ama wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan barnaamijyada qulqulka ugu fiican ee suuqa, ha seegin qaybtaan Blusens.
Dhexdeeda waxaad awoodi doontaa inaad marwalba la socoto wararkan ku saabsan burcad-badeednimada iyo qulqulka, si aadan u seegin wax kasta oo ku dhaca qaybtan suuqa. Halkan waxaad ka akhrisan kartaa wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan qaybtaan:
Pirate Bay waxay mar kale ku shaqeysaa aaggeeda
by Rafa Rodriguez Ballesteros samee 2 sano .
Pirate Bay shaki la'aan waxay ahayd websaydh tixraac sannado ah dhammaan noocyada soo dejinta, ...
Olole phishing cusub oo loo marayo SMS isagoo iska dhigaya aqoonsiga Amazon
by Qolka Ignatius samee 3 sano .
Muddo ka badan hal sano, dhammaan boggaga internetka ee doonaya in lagu awoodo in lagu muujiyo mashiinka raadinta ...
Sida loo daawan karo dagaallada dibiga ee internetka bilaash
by Eder Esteban samee 3 sano .
Dagaal dibi-dagaalku wuxuu ku sii yeelanayaa taageerayaal badan waddamada qaarkood. In kasta oo joogitaankiisa telefishanka uu hoos uga dhacay ...
Sida loo daawado Feerka khadka tooska ah
Feedhka waa ciyaar isboorti ku leh malaayiin taageerayaal ah adduunka oo dhan. In kasta oo ay tahay wax aan caadi ahayn inay jiraan ...
Sida loogu daawado UFC khadka tooska ah
UFC (Ultimate Fighting Championship) waxay noqotay mid kamid ah cayaaraha ugu caansan sanadihii ugu dambeeyay. Malaayiin…
Sida loo daawado teniska bilaashka ah khadka tooska ah
Tennisku waa isboorti xiiseeya malaayiin isticmaale. Waqti ka waqti, waa suurtagal in la daawado tartamada qaar ...
Waa maxay Deezloader maxaase loogu talagalay
Qaarkiin ayaa laga yaabaa inay yaqaanaan magaca Deezloader. In kasta oo ay u badan tahay inay taasi tahay aqlabiyadda ...
Beddelka Plusdede si loo daawado filimada iyo silsiladaha markii la xidho ka dib
by Miguel Hernández samee 4 sano .
Plusdede ayaa ku dhawaaqday xiritaankeeda, taas oo mar beddel u ahayd Pordede, websaydhka u adeegay in la wadaago ...
Tilmaamaha ugu dambeeya ee lagu arko dhamaan kubada cagta sanadkaan Spain
Kubadda Cagta ayaa noqotay Xarafka Barakaysan ee shirkado badan oo bixiya waxyaabaha maqalka ka ah Spain, in kastoo ...
Playz waxay soo bandhigeysaa barnaamijkeeda cusub si ay awood ugu yeelato inay aragto dhamaan waxyaabaha asal ahaan ka kooban
Playz waa goobta cusub ee maadooyinka dhijitaalka ah ee 'RTVE' oo aan ka helno xulasho ballaaran oo ...
Waxay ku dacweeyaan shirkadda caalamiga ah ee Nike adeegsiga barnaamijyada burcad-badeedda
Halkan qofna looma tudhin. In ay qabtaan dad caalami ah oo ku dhibaateeya been-abuurka alaabteeda adduunka oo dhan, ...
Ka eeg TDT khadka tooska ah
Kubadda cagta khadka tooska ah uga daawo
Goobaha ugufiican ee laga daawado filimada khadka tooska ah bilaash